भोलि डीभीको नतिजा सार्वजनिक हुँदै, कसरी हेर्ने ? - सर्लाही टुडे
June 5, 2020 SarlahiTodayLeaveaComment on भोलि डीभीको नतिजा सार्वजनिक हुँदै, कसरी हेर्ने ?
काठमाडौंः अमेरिकी डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) २०२१ को नतिजा भोलि जेठ २४ मा सार्वजनिक हुँदैछ ।
अमेरिकी दूतावासका अनुसार नेपाली समयअनुसार भोलि राति ९ः४५ बजे डीभीको नतिजा प्रकाशन हुन हुनेछ ।
नतिजा थाहा पाउनका लागि डिभी भर्दाको समयमा प्राप्त गरेको कन्फर्मेसन नम्बर प्रयोग गरी https://dvprogram.state.gov मा हेर्न सकिने दूतावासले जनाएको छ।
नेपाली समय अनुसार भोलि राति ०९:४५ बजे डाइभर्सिटी भिसा(डिभी) २०२१ को नतिजा प्रकाशन हुँदैछ। नतिजा थाहा पाउन कृपया भोली जेठ २४ रातिको ०९:४५ बजेपछि तपाईंले डिभी भर्दाको समयमा प्राप्त गर्नुभएको कन्फर्मेसन नम्बर प्रयोग गरी https://dvprogram.state.gov/ मा हेर्नुहोला। यदि तपाईंले सो नम्बर बिर्सनुभएको छ भनेपनि “Forgot Confirmation Number” मा क्लिक गरी मागेको विवरण दिंदा तपाईंको नतिजा हेर्न मिल्छ।
DV Entrant Status Check begins Saturday, June6at 12 noon EDT and 21:45 Kathmandu time. DV-2021 entrants will be able to use their unique confirmation number, provided at registration, to check the online Entrant Status Check at dvprogram.state.gov to see if their entry was selected. (If you have forgotten your Confirmation Number, use the “Forgot Confirmation Number” button to retrieve it.)
मलंगवामा बैंक तथा वितिय संस्था प्रत्येक दिन खुल्ने, खाद्यान्न तथा किराना पसल साताका तीन / तीन दिन खोल्ने सहमति